शेयर फुटेज र भिडियो प्रभाव संसाधन साइटहरू
बी-रोल, स्टक फुटेज, समाचार फुटेज, संगीत, पृष्ठभूमि भिडियो, ट्रान्जिसन, चार्ट, थ्रीडी चार्ट, थ्रीडी भिडियो, भिडियो इन्फोग्राफिक टेम्प्लेटहरू, ध्वनी प्रभाव, भिडियो प्रभावहरू, र तपाईंको अर्को भिडियोको लागि पूर्ण भिडियो टेम्प्लेटहरू पनि अनलाइन खरीद गर्न सकिन्छ। जब तपाइँ तपाइँको भिडियो विकास सुव्यवस्थित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यी प्याकेजहरू वास्तवमा तपाइँको भिडियो उत्पादनको गति बढाउन र तपाइँका भिडियोहरूलाई समयको एक अंशमा अझ बढी पेशेवर देखिन सक्छ।
यदि तपाईं पर्याप्त टेक जानकार हुनुहुन्छ भने, तपाईं केही फुटेज खरीदमा डुबुल्की मार्न पनि सक्नुहुन्छ। केही एनिमेसनहरू, उदाहरणका लागि, एनिमेसन विजार्ड बिना भिडियो सम्पादन गर्ने, बदल्ने, लोगो गर्ने, पाठ परिवर्तन गर्ने आदिमा कसरी अचम्मका निर्देशनहरू छन्।
यहाँ एक महान उदाहरण छ। यो जाँच गर्नुहोस् VideoHive बाट व्हाइटबोर्ड प्याक - तपाइँ तपाइँको आफ्नै स्पष्टीकरणात्मक भिडियो सँगै राख्न सबै अलग पूर्व विकसित दृश्यहरू उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ!
वा तपाइँ तपाइँको नयाँ आईफोन अनुप्रयोग को बारे मा प्रभावहरु पछि एक राम्रो भिडियो जारी गर्न चाहानुहुन्छ। केवल किन्नुहोस् BlueFX बाट आईफोन क्याटलग र तपाईं जान!
त्यहाँ एक जोडी साइटहरू छन् जुन तपाईं वास्तवमै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन सम्पूर्ण इन्टरनेटमा stock० भन्दा बढी स्टक फुटेज साइटहरू खोजी गर्दछ। चेक आउट गर्नुहोस् Footage.net.
शेयर भिडियो फुटेज साइटहरू
तपाईंको अर्को प्रोजेक्टको लागि रोयल्टी-फ्रि स्टक भिडियो फुटेज खोज्नका लागि महान स्रोतहरूको सूची यहाँ छ। साइट यसको अधिक विविधता र कम लागत को कारण म सबैभन्दा अधिक प्रयोग गर्दछु Depositphotos। यदि तपाइँ खोजी क्षेत्र मा भिडियोको साथ खोजी गर्नुभयो, परिणाम भिडियो हुनेछ। वा, तपाईं तिनीहरूको खोज ड्रपडाउनबाट भिडियो चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
123RF - HD स्टक फुटेज र भिडियोहरू
एडोब स्टक - स्टक फुटेजमा सर्वश्रेष्ठको साथ तपाईंको सर्वश्रेष्ठ विचारहरू जीवनमा ल्याउनुहोस्।
आयु Fotostock - रोयल्टी निःशुल्क र व्यवस्थित अधिकार भिडियो क्लिपहरू।
Alamy - million 55 मिलियन भन्दा बढि उच्च गुणवत्ता स्टक छवि, भेक्टर र भिडियोहरू
Clipcanvas.com - एक पटक इजाजतपत्र शुल्क, सदैव प्रयोग, विश्वव्यापी, कुनै पनि मिडिया, कुनै पनि ढाँचा, बहु डाउनलोडहरू
कर्बिस मोशन - उच्च स्तरको रचनात्मक र सम्पादकीय सामग्री जुन लगातार अपडेट हुन्छ
Depositphotos - को एक प्रायोजक Martech Zone!
डिजिटलजुइस - भिडियो प्रभावहरू र फुटेज डाउनलोडहरू।
विघटन - आजको दृश्य कहानीकारका लागि HD फुटेज
iSTOCKPHOTO - स्टक भिडियो को लागी खोजी गर्नुहोस्
मोशनइलिमेन्टहरू - एशिया-प्रेरित स्टूच फुटेज र एनिमेसन
फिल्म टूलहरू - पूर्ण नि: शुल्क एनिमेटेड २ डी र थ्रीडी पृष्ठभूमि एनिमेसन, तल्लो तिहाइ र अधिक
Plixs - CC0 लाइसेन्सिंगको साथ हजारौं उच्च गुणवत्ता निःशुल्क छविहरू र फुटेज भिडियोहरू खोज्नुहोस्।
Pond5 - शेयर मिडिया बजार
रेवोस्टक - किफायती स्टक भिडियो फुटेज, प्रभाव परियोजनाहरू, संगीत र ध्वनी प्रभाव पछि
Shutterstock - रोयल्टी-फ्री स्टक भिडियोहरू
स्टक फुटेज - उच्च गुणवत्ता स्टक वीडियो फुटेज रोयल्टी निःशुल्क र अधिकार प्रबन्धित इजाजतपत्र संग। अल्ट्रा HD फुटेज 1080p मा डाउनलोड गर्नका लागि उपलब्ध छ।
स्टोरी ब्लकहरू - रोयल्टी-फ्री स्टक फुटेज, मोशन पृष्ठभूमि, प्रभाव टेम्प्लेटहरू र अधिक पछि डाउनलोड गर्नको लागि सदस्यता-आधारित संसाधन।
भिडिओहाइभ - रोयल्टी निःशुल्क भिडियो फाईलहरू
Vimeo - अपवादात्मक, रोयल्टी-फ्रि स्टक भिडियो, Vimeo सम्पादकहरू द्वारा ह्यान्डपिक।
YayI छवि भिडियोहरू - 250,000 भन्दा बढी HD र 4K भिडियो फुटेज क्लिपहरू कि किफायती मूल्यका छन्।
र यदि तपाईं केहि क्लासिक फुटेज चाहनुहुन्छ भने, जाँच गर्नुहोस् इन्टर्नेट फिल्म अभिलेखहरू!
नोट: हामीसँग यो पोष्टमा केहि सम्बद्ध लिंकहरू छन्!
टैग: 123RFएडोबएडोब स्टकप्रभाव पछिप्रभाव टेम्पलेट पछिआयु Fotostockअलामीकुनै ढाँचाकुनै मिडियाb-रोलबीबीसी मोशन ग्यालरीbluefxक्लिपकानवासकर्बिस मोशनडिजिटलजुइसविघटनदृश्यफुटेज खोजीFramepoolनि: शुल्क शेयर फुटेजgetvidआईमुभिइन्टर्नेट फिल्म अभिलेखहरूISTOCKPHOTOमार्केटिंग भिडियोहरूगति पृष्ठभूमिगति तत्वहरूफिल्म टूलहरूबहु डाउनलोडहरूएक पटक लाइसेन्स शुल्कस्थायी प्रयोगPond5रेवोस्टकअधिकाररोयल्टी मुक्तShutterstockस्टक एनिमेसनस्टक फुटेजशेयर भिडियोशेयर भिडियो फुटेजस्टोरी ब्लकहरूसंक्रमणभिडियो ब्लकहरूभिडियो प्रभावहरूभिडियो फुटेजभिडियो ट्रान्जिसनभिडिओहाइभvimeo स्टकसेतोबोर्डविश्वभर
सर्वेक्षण परिणामहरू: मार्केटरहरू महामारी र लकडाउनलाई कसरी जवाफ दिन्छन्?
जनवरी १, २०१9१२::2014 अपराह्न
उल्लेखको लागि धन्यबाद, डगलस! धेरै धेरै धन्यवाद।
अगस्ट,, २०१ 18 2014:२१ अपराह्न
महान स्टक मिडिया बजारको यस विस्तृत सूचीको लागि मोशनइलेमेन्ट्स समावेश गरेकोमा धन्यवाद।
निश्चित गर्नुहोस् भ्रमण गर्नुहोस् र नयाँ र सुविधाजनक भिजुअल खोजी सामग्री छिटो फेला पार्न कोशिस गर्नुहोस्।